gepostet in Allgemein, Redecorate, ကော်ဇော, သားသမီးတို့အဘို့ wallpaper, Tapezieren , ပန်းချီဆရာမ, Redecorate, ကော်ဇော, Living Wallpaper	| No Comments »
ဖိုက်ဘာမှန်နောက်ခံပုံများကသူတို့အသက်ရှည်နှင့်၎င်းတို့၏လိုက်ဖက်တဲ့အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးသွင်ပြင်လက္ခဏာနေကြတယ်. သူတို့ဟာထို့ကြောင့်ဖုံးအုပ်ကာအရံအဖြစ်အများပြည်သူသို့မဟုတ်မြင့်မားသောအသုံးပြုမှုအာကာသအတွင်းအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်. ဘာကိုအတိုင်းအတာအထိတစ်ဖိုက်ဘာမှန်နောက်ခံပုံများလည်းအကျိုးရှိစေခြင်းငှါသင့်ကိုယ်ပိုင်လေးမြို့ရိုးကိုအဘို့ဖြစ်သပွေနိုငျ, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆွေးနွေးကြမည်. Glasfasertapete im Diskurs Glasfasertapeten nehmen in Bezug auf ihre Umweltverträglichkeit […]
gepostet in Allgemein, Redecorate, ကော်ဇော, Tapezieren , ပန်းချီဆရာမ, Redecorate, စက္ကူ	| No Comments »
ပို. ပို. လူဦးလေ့, ဟောင်းဘုန်းအသရေမှကိုယ်ပိုင်အိမ်ကိုကူညီ. ဖြစ်နိုင်သမျှပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံနည်းပညာတွေကိုဝယ်လိုအား၌ရှိကြ၏အဖြစ်အညီ, ရှိသမျှအထက်အဖြစ်ရိုးရှင်းပြီး, အရာသို့မဟုတ်အလွန်အကျွံအတွေ့အကြုံ. ကျွမ်းကျင်မှုကိုလိုအပ်သည်. non-ယက်နောက်ခံပုံများ, ဤအခြေအနေတွင်အတွက်အားသာချက်ရှိ, dass sie trocken angebracht werden können und damit auch von blutigen Anfängern in der Kunst des Tapezierens problemlos zu […]
gepostet in Allgemein, Redecorate, မဉျြးသား, အလေးအနကျပွော, ကော်ဇော, Tapezieren , ပန်းချီဆရာမ, သားသမီးတို့အဘို့ wallpaper, ခွံနောက်ခံပုံများ, စက္ကူလှေကား, Wand	| No Comments »
၎င်း၏အတွင်းပိုင်း Neurenovierung ဖို့စီစဉ်မည်သူမဆို, နှိုင်းယှဉ်လျှင် options တွေကိုတစ်ဦး plethora ရင်ဆိုင်နေရ. ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံနောက်ခံပုံများရေရှည်တည်တံ့လူကြိုက်များ, ဤအခြေအနေတွင်မျှမတိုက်ဆိုင်မှုနှစ်သက်တော်မူ၏. အဘယျသို့ကတခြားမြို့ရိုးအဖုံး်ရှေ့တော်၌အသေးစိတ်အတွက်ဒီထူးခြားမှုဖြစ်စေသည်နှင့်အဘယ်သို့မှတ်ရ texture နောက်ခံပုံများလျှောက်ထားခြင်းရှိသောအခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်, ကိုအောက်ပါ rudimentary တှငျဆှေးနှေးခံရဖို့. အဘယျသို့နောက်ခံပုံများ textured နေကြတယ်? Strukturtapeten bestechen nicht […]
gepostet in Redecorate, မဉျြးသား, အလေးအနကျပွော, ကော်ဇော, သားသမီးတို့အဘို့ wallpaper, Tapezieren , ပန်းချီဆရာမ, Redecorate, မဉျြးသား, အလေးအနကျပွော, သားသမီးတို့အဘို့ wallpaper, စက္ကူလှေကား, Wand, Living Wallpaper	| No Comments »
non-ယက်နောက်ခံပုံများယခုရှည်လျားဂန္ထဝင်နောက်ခံပုံများနှင့်အတူတွဲဖက်တို့သည်လည်းမိမိတို့နေရာ၌ခဲ့ပြီ – နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. သူတို့ကအလွန်လွယ်ကူလုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါတယ်, အဘယ်သူမျှမစိုလိုအပ်ပြီးဒီဇိုင်းနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုအလွန်အမင်းပြည့်စုံသော selection ကိုထောက်ပံ့ပေး. Die Bestandteile der Vliestapete Vliestapeten bestehen aus Polyester- နှင့် cellulose အမျှင်, အရာပိုလီမာပေါ်တွင်အခြေခံသည်အထူးစာအုပ်ချုပ်သမားချိတ်ဆက်. Auf […]
gepostet in Redecorate, မဉျြးသား, အလေးအနကျပွော, ကော်ဇော, သားသမီးတို့အဘို့ wallpaper, Tapezieren , ပန်းချီဆရာမ, မဉျြးသား, အလေးအနကျပွော, သားသမီးတို့အဘို့ wallpaper, စက္ကူလှေကား, Wand, Living Wallpaper	| No Comments »
အဆိုပါ woodchip တစ်ကြမ်းတမ်းအတူနောက်ခံပုံများအသွင်သဏ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်, မညီညာသော, ဖွဲ့စည်းပုံမှာရဲ့မျက်နှာပြင်. မူလကဒါဟာတစ်နှစ်ကြီး 1864 အဆိုပါဆေးဝါးဟူဂို Erfurt ကတီထွင်, အဘယ်သူသည်နောက်ပိုင်းတွင်အစောပိုင်းတွင် size ကိုပုံနှိပ်နောက်ခံပုံများများအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဟန်ပြများအတွက်အလှဆင်အဖြစ်ဤစာတမ်းနောက်ခံပုံများ၏အားသာချက်ကို ယူ.. ပြီးပြီ 1920 အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းများအတွက်အသုံးပြုတဲ့ woodchip နောက်ခံပုံများခဲ့. Vertrieben […]